Ny zavona matevina dia mampihemotra sidina maherin'ny 100 any amin'ny seranam-piaramanidina ao Moskoa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Ny zavona matevina dia mampihemotra sidina maherin'ny 100 any amin'ny seranam-piaramanidina ao Moskoa
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny zavona matevina dia mampihemotra sidina maherin'ny 100 any amin'ny seranam-piaramanidina ao Moskoa.
Ny maraina, nitatitra ny Sampan-draharahan'ny Fitaterana An'habakabaka Federaly ao Rosia fa sidina maherin'ny 30 no nafindra tany amin'ny seranam-piaramanidina nifandimby tao Moskoa nandritra ny alina.
Ny zavona mafy dia manelingelina ny sidina avy any amin'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo, Domodedovo ary Vnukovo ao Moskoa.
Maherin'ny zato ny sidina voatondro ao amin'ny seranam-piaramanidina lehibe ao Moskoa noho ny zavona mikitroka androany.
Ny seranam-piaramanidina dia nitanisa ny tsy fahitana fahitana ho anton'ny fahatarana sy fanafoanana sidina am-polony.
Sidina maherin'ny 100 no nofoanana na nahemotra tao amin'ny seranam-piaramanidina lehibe ao Moskoa noho ny zavona be.
Sheremetyevo, Domodedovo ary ny seranam-piaramanidina Vnukovo dia nanambara fahatarana sy fanafoanana sidina am-polony tamin'ny mitataovovonana, noho ny zavona mikitroka mandrakotra ny renivohitr'i Rosia.
In Sheremetyevo, sidina maherin'ny 30 no tara (tamin'ny 11:50 ora Moskoa), tao Domodedovo – sidina maherin'ny 25 (tamin'ny 12:15 ora Moskoa), tao Vnukovo – sidina hatramin'ny 47 (tamin'ny 12:10 ora Moskoa) . Voalaza ihany koa fa fiaramanidina 20 farafahakeliny no nafindra tany amin'ny seranam-piaramanidina hafa, anisan'izany ny tao Domodedovo.
“Tamin'ny 2 Novambra (tamin'ny 12:10 ora Moskoa) sidina 47 no nihemotra (nandritra ny adiny iray mahery) tany Vnukovo noho ny tsy fahitana fahitana,” hoy ny seranam-piaramanidina.
"Nanomboka tamin'ny 00:00 ka hatramin'ny 12:15 ny seranam-piaramanidina dia nanompo sidina 120 teo ho eo ho an'ny fahatongavana sy fiaingana. Sidina 16 no nafindra tany Domodedovo avy amin'ny seranam-piaramanidina hafa ao amin'ny tobin'ny rivotra ao Moskoa, sidina 23 no nandeha tamin'ny seranam-piaramanidina nifandimby,” hoy ny tatitry ny sampan-draharahan'ny mpanao gazety ao Domodedovo.
Ny maraina, nitatitra ny Sampan-draharahan'ny Fitaterana an'habakabaka Federaly fa sidina maherin'ny 30 no nafindra tany amin'ny seranam-piaramanidina nifandimby tao Moskoa nandritra ny alina.
Ny alin'ny 1-2 Novambra, dia nisy zavona matevina nanarona an'i Moskoa. Araka ny filazan'ny Ivotoerana Hydrometeorologique ao Rosia, ny zavona eto an-drenivohitra dia avy amin'ny voajanahary ary nipoitra vokatry ny hatsiaka mafy ny rivotra. Heverina fa hiparitaka amin'ny 2 ora tolakandro any Moskoa ary amin'ny 00 ora tolakandro any amin'ny faritr'i Moskoa.